Alina miavaka | NewsMada
Na eo aza ny fahantrana sy ny fahasahiranana, ny sondro-bidy eny an-tsena ary ny delestazy, azo inoana fa hanao izay mety ny Malagasy isan-tokantrano, rahampitso alina, handray ny taom-baovao 2017. Ny alahady voalohany amin’ny taona koa, tsy ho ambanin-javatra velively fa hiarahan’ny fianakaviana amin’ny sakafo miavaka amin’ny isan’andro. Hiseho tanteraka ny tsy fitovian-tsaranga izay fomba fiteny nahazatra tany amin’ny taona fitopolo tany rehefa niredareda ny tolom-bahoaka narahina revolisiona sosialisata.
Ao ireo mpanefoefo hilanona eny amin’ireo toeram-pandihizana sy fisakafoana. Antapitrisany ariary ny lany indray alina fotsiny. Mangina fotsiny ny fety fanamarihana ny taom-baovao ny ampitso. Ny ankamaroany kosa, zara raha hahita harapaka. Ahoana ny hanaovana fety ho an’ireo zara raha mahazo dimy arivo ariary isan’andro, ny ankizy dimy na enina? Efa tsy laitra rahateo ny vidin-kena na ny omby na ny kisoa. Ny atody, efa 500 Ar vao mahazo izao. Mandalova fotsiny etsy La Réunion Kely fa hahita tokoa izany fahantrana sy tsy fisiana izany ianao.
Tsy vitan’ny kabary sy ny fampidiran-trosa ny firenena ny ady amin’ny fahantrana.
Saika hafenina ny mpitarika posy sy sarety nandritra ny frankofonia. Raha nahomby araka ny filazan’ny mpitondra ny fanarenana ny toekarena, efa ela ireny fisehoan’ny fahantrana, mahavaky fo matetika, ireny no tsy hita intsony. Ny mpivarotra tsy ara-dalàna manemotra ny arabe, mampitohana ny fifamoivoizana, mbola mariky ny fahoriam-bahoaka tsy takona afenina intsony. Fa na inona na inona fomba handraisana ny taona vaovao 2017, ho henjana ny fanalana ny volana janoary rehefa vita ny fandaniana nandritra ny fetin’ny Noely sy ny faran’ny taona. Indrindra fa mihalohalo eo foana ny fampiakarana ny saran’ny fitaterana, ataon’ireo kaoperativa misy ny taxi-be. Tsy vitsy rahateo koa ny tompon-trano hanondrotra ny hofan-trano rehefa miandoha ny taona.